အချိန်ကွဲပြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2015) တွေထဲမှာလိင်မှထုတ်ပြန်သောကျူးလွန်သူ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2015 ဒီဇင်ဘာ;57(6):637-42. doi: 10.1016/j.jadohealth.2015.08.015.
Thompson ကအမတ်1, Kingree JB2, Zinzow H ကို3, Swartout K သည်4.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော် (SA) ကာကွယ်ခြင်းအချိန်-ကွဲပြားအန္တရာယ်အချက်များကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အန္တရာယ်ဘယ်နေရာတွေမှာကိုလိုက်နာသူကိုယောက်ျားခွဲခြားမယ်ဆိုရင်အဆုံးအဖြတ်များကအကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
ဒေတာကို 795-4 အတွက်ကောလိပ်ကျောင်းသူတို့ရဲ့ 2008 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အဆုံးမှာစစ်တမ်းကောက်ယူ 2011 ကောလိပ်အထီးနှင့်အတူတစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုကနေဖြစ်ကြသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစီအမံအန္တရာယ်အချက်များပြောင်းလဲမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်လမ်းကြောင်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့စာအဆက်အသွယ်လျှင်စမ်းသပ်ပြီးယေဘုယျ linear မော်ဒယ်များ။
အန္တရာယ်အချက်များအတွက်အပြောင်းအလဲများလုပ် SA ဘယ်နေရာတွေမှာနဲ့စာအဆက်အသွယ်။ , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက် Impulse တွင်တစ်ပြိုင်တည်းလျှောက်လျော့နည်းပြသခဲ့သည်လုပ် SA တစ်သမိုင်းနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းဆီသို့ရောက် လာ. , ဒါပေမယ့်ကောလိပ်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ကျူးလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျသူကိုယောက်ျား, မိန်းမ, မုဒိမ်းမှုထောက်ခံယုံကြည်ချက်, အတင်းအဓမ္မလိင်၏သက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်၏သဘောထားအမြင်များနှင့်သက်တူရွယ်တူဖိအားသဘောထားအမြင်ဆီသို့ရန်လိုသောသဘောထားများရှိသည် အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမိန်းမနှင့်လိင်, နှင့်၎င်းတို့၏ကောလိပ်နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်သေးငယ်တိုး။ ပြောင်းပြန်, အချိန်ကျော်လုပ် SA ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သူကိုယောက်ျားကတခြားလမ်းကြောင်းအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အန္တရာယ်အချက်များအတွက်ပိုကြီးတဲ့တိုးသရုပ်ပြခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အတွက်စေ့စပ်ကူထီးသောအလေးသာ key ကိုအန္တရာယ်အချက်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုနဲ့စာအဆက်အသွယ်။ စွန့်စားမှုအချက်များငြိမ်မတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဒီဇိုင်းကြားဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အန္တရာယ်ပြောင်းလဲမှုများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ကောလိပ်ကျောင်းသားများကို; ကူးစက်ရောဂါ; longitudinal ဒီဇိုင်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်; လမ်းကြောင်း